स्वार्थको लागि साथ छोडने मान्छे केही पल त खुशी हुन्छन तर जिन्दगीको दु:खद पलमा भने सधै एक्लै हुन्छन – अनमोल भनाईहरू अनमोल भनाई
१) आफ्नो अतीतलाई कहिल्यै याद नगर्नु तर त्यो अतितले तपाईलाई के सिकाएको थियो त्यो भने कहिल्यै नभुल्नु किनकि यसैले तपाईलाई जिन्दगीमा अगी बढ्न सिकाउने छ ।
२) हजारौ युद्दहरु जित्नुभन्दा ठुलो कुरा हो आफैलाई चिन्नु । यहि नै तिम्रो विजय हो, यसलाई तिमीबाट कसैले पनि खोस्न सक्दैन ।
३) एउटा कठोर मन भित्र कुनै पनि हालतमा प्रेम पलाउँ सक्दैन जबसम्म त्यो परिवर्तन हुदैन किनकि प्रेम कोमलता र सरलतामा फुल्ने फुल हो, त्यसैले तपाई जति कठोर बन्नुहुन्छ त्यतिनै प्रेम तपाई बाट टाढा हुदै जान्छ ।
४) स्वार्थको लागि साथ छोडने मान्छे केही पल त खुशी हुन्छन तर जिन्दगीको दु:खद पलमा भने सधै एक्लै हुन्छन ।
५) जब प्रेम मान्छेको तागत बन्छ तब त्यो पुरै दुनिया संग लड्न तयार हुन्छ तर जब त्यहि प्रेम मान्छेको कमजोरी बन्छ तब त्यहि मान्छे यति कमजोर बन्छ कि एउटा मान्छेको अभावमा पनि बाच्न सक्दैन ।
६) चोट पराइले होइन यहाँ आफ्नैले धेरै दिन्छन, बिना गल्ती सजायको बदला लिन्छन । ७) हो म घमण्डी छु, त्यस्ता हरुको लागि जसले अरुको इज्जत गर्न जान्दैनन ।
८) कहिले पनि कठिन परिस्थितिको अगाडी आफ्नो घुडा नटेक्नुस किनकि तपाइँ संग त्यो तपाई संग त्यो परिस्थितिलाई बदल्न सक्ने सामर्थ्य छ ।
९) एउटा गल्ति बाट सिख सिकेर अगाडी बढ्ने समझदार हो तर त्यहि गल्ति बारम्बार दोहोर्याई रहने मुर्ख हो ।
१०) मान्छेले समयलाई सोधेछ, आखिर किन हरेक पटक म हार्ने गर्छु ? तब समयले भनेछ, दिन होस् या रात, घाम होस् या छाया, बर्षा होस् या खडेरी, म सधै हिड्ने गर्छु, त्यसैले त म जित्ने गर्छु । यदि तपाई पनि जित्न चाहनुहुन्छ भने सधै हिड्ने गर्नुहोस ।
११) मिठो बोल्दैमा मान्छे चिनिदैन, उ कस्तो छ भनेर चिन्न उसले अरु प्रति गर्ने ब्यबहार बुझ्नु जरुरी छ । १२) मन दुख्दै गरोस केहि फरक पर्दैन बस दुखाउने आफ्ना नभए भो ।
१३) शक्तिशाली त्यो होइन जसले आफ्नो दुश्मनीमाथी नियन्त्रण पाउन सक्छ, शक्तिशाली त त्यो हो जसले आफैमाथी नियन्त्रण पाउन सक्छ ।
१४) असफल मान्छे दुनियाको दरले सोच बदल्ने गर्छन् तर सफल मान्छे आफ्नो सोचले दुनियालाइनै बदल्ने गर्छन् ।
१५) यदि कोहि व्यक्ति असल सोचका साथ् बोल्छन र काम गर्छन भने, उसको छायाले जस्तै खुसीले उसको साथ् कहिले छोड्दैन ।
आफूमा सुधार ल्याउनको लागि अपनाउन सकिने टिप्स : संसार बदल्नुछ भने पहिले आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ । आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नु छ भने आफूलाई दिन प्रतिदिन सुधार गर्दै हिजो भन्दा आज अझ राम्रो व्यक्ति बन्न हरदम प्रयास गर्नुपर्छ । यसको लागि के गर्न सकिन्छ ?
– लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस् । ठूलो लक्ष्यभित्र साना-साना लक्ष्यहरु पनि राख्नुहोस् । – साना लक्ष्यहरु पूरा भए/नभएको विवरण राख्नुहोस् ।
– आफ्नो प्रगति विवरण मूल्यांकन गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । – आफूलाई अरुसंग नदाज्नुहोस् । तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ, विशेष हुनुहुन्छ। आफूलाई अंगाल्नुहोस् ।
– प्रतिस्पर्धा अरुसंग होइन, हिजोको आफूसंग गर्नुहोस् । – आफ्नो काम सकेसम्म आफै गर्ने गर्नुहोस् ।
– अरुलाई सहयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस् । – आफ्नो नैतिक आचरणलाई सधै राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुहोस् ।
– प्रेरणा दिनेखालका विषयवस्तु तथा किताब पढ्ने गर्नुहोस् । – नकारात्मक सोंच राख्ने मानिसहरुसंगको दूरी बढाउनुहोस् ।
– असल सोंच राख्ने मानिसहरुको संगत गर्नुहोस् । – प्रत्येक दिन केही नयाँ कुरा सिक्न उत्सुक रहनुहोस् । – वैचारिक बहसमा सहभागी बन्नुहोस् ।
– सिकेको वा देखेको नयाँ कुरा, आफ्ना विचार र भावना लेख्ने गर्नुहोस् । – आफ्नो ख्याल राख्ने, व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् ।
– मेडिटेसन वा शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस् । – अरुको काम तथा विचारलाई पनि ग्रहण गर्ने/ सुन्ने. विश्लेषण गर्ने र सकारात्मक आलोचना गर्ने गर्नुहोस् ।